Kachasịsị Mma Shakekọrịta Button Ngwaọrụ maka WordPress | Martech Zone
Izu ole na ole gara aga, onye nọ na ntanetị Facebook m jụrụ ihe kacha mma mgbakwunye bọtịnụ mmekọrịta na-adị maka WordPress. M hụrụ n'anya ịdị mfe nke Akwụkwọ JetPack na eziokwu ahụ bụ na ọ mepụtara ya site na Automattic programmers (ndị mmepe nke WordPress); agbanyeghị, ma ọ bụ ntọala ndị ọbịa m ma ọ bụ mgbakwunye ụfọdụ mere ka nkesa popup bụrụ ihe na-abaghị uru (ekele Michael Stelzner maka igosi na!). M ka na-eji ngwa mgbakwunye iji kpoo ọdịnaya na netwọkụ mmekọrịta, mana anaghị m eji bọtịnụ nkekọrịta na saịtị ahụ ogologo.
Anyị na-ejikwa ya Ire ọkụ ngwa mgbakwunye nke dị nnọọ mma. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ ngwa mgbakwunye ma na-erezi bọtịnụ ọrụ mmekọrịta ha dị ka ndenye aha. Ọrụ ahụ arụghịkwa nke ọma ma m na-agbago n'ọtụtụ nsogbu ka m hapụ ya na ngwa mgbakwunye. Ọ dị oke njọ ebe otu n'ime njirimara dị ukwuu bụ na enwere m ike ịnweta ngụkọta maka ọkwa ọ bụla na m mepụtara ụfọdụ koodu iji tinye ha na ebe ọzọ na ndebiri iji rata ọtụtụ mmadụ ịgụ.
Ya mere, ịchụ nta ahụ bụ maka nnukwu ngwa mgbakwunye WordPress nke ga-enye bọtịnụ bọtịnụ mara mma mara mma na igbu nhọrọ. Emere m ọtụtụ ọgụgụ na ule nke ọtụtụ plugins na ngwaahịa yana ịkpọ ya kwụsịrị na ịzụta nke Mfe bọtịnụ mmekọrịta dị mfe maka WordPress.
Ihe mgbakwunye ahụ abụghị mfe ịtọlite ​​ma hazie, mana ọkachamara dị n'ime dị mfe yana nhọrọ dị elu bara ụba, gụnyere mmekọrịta ndị na-eso mmekọrịta wijetị na ụfọdụ nchịkọta nchịkọta.
Enweela m njikọ njikọta anyị na post a - budata ya Mfe bọtịnụ mmekọrịta dị mfe maka WordPress ma ka ndị na-agụ akwụkwọ gị kwalite gị!
Tags: bọtịnụ facebookbọtịnụ google +bọtịnụ mmekọrịtasocial button wordpress ngwa mgbakwunyebọtịnụ ndị na-elekọta mmadụbọtịnụ mmekọrịta mmekọrịta dị mfe mmekọrịta mmekọrịta kacha mma bọtịnụ mmekọrịta mmekọrịtammekọrịta mmadụ na ibe yasocial share wordpress ngwa mgbakwunyebọtịnụ twitterwordpress plugin
Otu Azụmaahịa Gị Nwere Ike Isi Mee Ka Ndị Nleta Weebụ Na-amaghị Ama Na-eduga